FAQ - Ningbo Abadayisi Union Imp & Exp Co., Ltd.
I-China Ngenisa Izindaba
1. Yiziphi izimpahla engingazithenga eChina Wholesale Market?
1. Izinto zikaKhisimusi nezePhathi 2. Amathoyizi 3. Izinto zepulasitiki nezasendlini 4. Izinto zobumba nezingilazi 5. Amabhokisi empahla nezikhwama 6. Ifenisha kanye nefenisha yasekhaya 7. Izicathulo zesikhumba nezimbadada 8. Amathuluzi wehadiwe 9. Amathuluzi kagesi 10. Isikole Sebenzisa Izinto 11. Izingubo Nokugqoka 11. AmaSpredishithi Wokulala Namakhava Embhede 12. Izinto zokwenziwa 13. Izinto Zezemidlalo 14. Izimpahla Zesilwane 15. I-
njengesikhungo esikhulu sokuhweba emhlabeni . Ungathola noma yini oyifunayo lapho. Ngoba zonke izifundazwe zinomsebenzi wazo, ngakho-ke sakha ihhovisi e-Yiwu, e-Ningbo, eShantou, e-Guangzhou ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Injani insizakalo yakho?
1. Imikhiqizo engumthombo oyidingayo futhi oyithumelayo ikhotheshini
2. Yiwu Market Guide kanye ne-Factory audit
3. Faka ama-oda bese ulandelela ukukhiqizwa
5. ukuhlolwa kanye nokulawulwa kwekhwalithi
6. Ukugcinwa kwamahhala kanye nensizakalo yokuhlanganisa
7. Nikeza ukubonisana kokungenisa
8 Phatha amadokhumende afanele
9. Ukususwa kwempahla nokuthunyelwa
Singenza ngaphezu kokucabanga kwakho
3. Uma ngiya kwi-yiwu, sisebenza kanjani ngokubambisana?
1. Ungithumelela ishejuli yakho yohambo ukukusiza ukubhuka ihhotela nezokuthutha.
2. Sizohlela izinduku ezimbili okufanele zilandelwe nawe futhi zisebenze emakethe noma efemini
3. Sizothumela yonke imininingwane ebusuku noma siphrinte incwadi ku ngakusasa ekuseni.
4. Kufanele uye ehhovisi lami uyohlola futhi uqinisekise ama-oda ngaphambi kokushiya i-Yiwu.
We ahlele zonke izinto kusengaphambili, efana: ehhotela, ezokuthutha, nezinduku, amathuluzi (tape, notebook, ikhamera njll ..), ulwazi imboni, imikhiqizo nokuhlonza ulwazi. Amaklayenti ungakhathazeki imisebenzi ekhatsi Yiwu.
4. Ngabe intengo yakho ingaphansi kuneyabahlinzeki evela kwa-Alibaba noma eyenziwe e-China?
Abahlinzeki kuzingxenyekazi ze-B2B kungaba yizimboni, izinkampani ezihweba, ingxenye yesibili noma ngisho neyesithathu yabaphakathi. Kunamakhulu entengo omkhiqizo ofanayo futhi kunzima kakhulu ukwahlulela ukuthi angobani ngokuhlola iwebhusayithi yabo. I-China ngaphambili ingazi, ayikho intengo ephansi kepha ephansi e-China.
Sigcina isithembiso sokuthi intengo ecashuniwe iyefana neyomhlinzeki futhi ayikho enye imali efihliwe. Sikunikeza indlela elula yokuthenga izimpahla kubaphakeli abahlukahlukene okungenzeka ukuthi batholakala emadolobheni ahlukene.Lokhu yilokho abahlinzeki beplatifomu be-B2B 'abakwazi ukukwenza ngoba ngokuvamile bagxila kumikhiqizo yensimu eyodwa.
5. I-oda lami lizothatha isikhathi esingakanani?
. Isikhathi sokulethwa sizoncika kakhulu ezicini ezimbili: ukutholakala kwento kanye nezinsizakalo zokuhambisa.
. Sinikeza amakhasimende izinsiza ezahlukahlukene zokuhamba, ezinjenge-express, imithwalo yomoya, ezokuThutha olwandle, ezokuhamba ngezitimela, i-FCL ne-LCL.
6. Ngabe ikhona i-MOQ lapho ufaka ama-oda kuwe?
Uma izimboni zinamasheya anele, singamukela ubuningi bakho;
Uma kungekho amasheya anele, izimboni zingabuza i-MOQ ngomkhiqizo omusha.
7. Senza kanjani ukukhokha?
1. Ngemuva kokufakwa kwe-oda, udinga ukukhokha ama-30% wenani lezimpahla njenge-deposti kithi (Imikhiqizo elwa nobhubhane idinga ukukhokha u-50% wenani lezimpahla njengediphozi).
2. Nikeza imigomo yokukhokha eguquguqukayo, noma yiliphi igama lokukhokha i-T / T, L / C, D / P, D / A, O / A liyatholakala ngokufunwa kwamakhasimende ethu.
8. Uma sengivele ngithenga eChina, ungangisiza ukuthekelisa?
Yebo! Ngemuva kokuthenga kwakho wedwa, uma ukhathazeka ngokuthi umphakeli akakwazi ukwenza njengoba udinga, singaba umsizi wakho wokuphusha umkhiqizo, uhlole ikhwalithi, uhlele ukulayishwa, ukuthunyelwa kwamanye amazwe, isimemezelo samasiko kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva Imali yesevisi iyaxoxisana.
9. Kungani udinga i-ejenti yokuhweba yiwu
1. Amafemu angaphezu kuka-80% awanayo i-Export License yawo
2. Amafemu amaningi awanabasebenzi abanele abakhuluma iSpanishi nabakhuluma isiNgisi abasebenza nabathengi abancane baseChina.
3. Iningi labaphakeli labaqinisekisile njengenkampani yokuhweba e-China kepha bazenza ifektri yangempela futhi amaklayenti awanakubatshela kulwazi olungelona iqiniso ku-inthanethi.
4. Ngakho-ke ukuhweba umenzeli kuyadingeka. Insizakalo enhle ye-agent eyodwa yokuthenga ayikwazi ukunciphisa kuphela izingozi zokuthenga kusuka e-China kepha futhi ingakusiza nge-savelot yesikhathi, izindleko nomzamo wokuthola, ukuqinisekisa, ukulawula ikhwalithi kanye nezinsizakalo zangemva kokuthengisa.
10. Uyini amandla?
1.Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-23 sokungenisa nokuthekelisa i-ejenti
2. Unabasebenzi abangaphezu kuka-1200. Iningi labasebenzi bethu linolwazi olungaphezulu kweminyaka eyishumi. Bazi kahle imakethe futhi njalo bangathola abahlinzeki abafanele kahle.
3. Iqembu lethu lakhe ubuhlobo bokuhweba obuzinzile nezimboni ezingaphezu kuka-10000 zaseChina namakhasimende ayi-1500 avela emazweni angaphezu kuka-120. NjengeMelika, iBrazil, iVenezuela, iMexico, iColombia, i-Argentina, iSpain, iPeru, iParaguay njalonjalo
4. Etholakala e-Yiwu, nayo inehhovisi e-Yiwu, e-Ningbo, e-Shantou, e-Guangzhou
5. Iba negumbi lombukiso elingu-10,000m² nendawo yokugcina impahla engu-20,000m²
6 Izisebenzi ezingama-500 + ezikhuluma kahle isiNgisi neSpanishi
Kunamandla amaningi esingawabalanga
11. Ngingafika kanjani edolobheni lase-Yiwu?
I Yiwu liseduze kakhulu nge Shanghai futhi Hangzhou, ungathatha Isitimela esinejubane eliphezulu noma idolobha ibhasi kusuka Shanghai, uma udinga, siphinde ungase uhlele imoto eyolanda usuka esikhumulweni sezindiza.
I Yiwu futhi ukuthi umugqa indiza esuka Guangzhou, shenzhen, Shantou futhi yafunda eHong Kong.
12. Kuthiwani ngokuphepha komphakathi kwe-Yiwu?
Idolobha laseYiwu liphephe kakhulu futhi lithule, uzobona abaningi bezinye izizwe behambahamba ngisho nesikhathi kuphakathi kwamabili. Bazoya endaweni yokucima ukoma noma bathathe iphathi nabangani.